HALKAN KA AQRISO W/W MOGTIMES DAIL 21 FEB 2021
Sunday February 21, 2021 - 10:22:55 in Wararka by Super Admin
DFS Oo Sheegtay In Dalal Shisheeye Ay Caqabad Ku Yihiin Fulinta Heshiiskii Doorashada
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa soo dhaweysay walaaca xaaladda dalka ka ay muujiyeen Dalalka xiriirka la leh dowladda ee ku aadan is marin waa ga ka taagan qabsoomida doorashooyinka dhacaya oo weli aan heshiis laga ga arin.
Qoraal kasoo baxay Wa saaradda Arrimaha dibad da dowladda ayaa waxaa lagu sheegay inay diyaar u tahay in la dhameystiro heshiiskii la ga gaaray doorashada 17-kii Sebtember, is la markaana khilaafyada jira lagu dhameeyo wa da-hadal nabadeed.
Dowladda ayaa sheegta in si loo xaliyo ca qabadaha ku hur gudan doorashada bilowd ay siyaasad ay ku dejineyso qaab heshiis la gu gaari, ayna sameeysay isku day kasta oo lagu dhameeystirayo heshiiks 17-kii Sebtem ber, balse ay ka cago jiidayaan qaar kamid ah dowlad Goboleedyada.
"Si kastaba ha noqotee, doorasho taariikhi ah oo hal qof iyo hal cod ah laguma guuleys an diidmada qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah Federaalka. Iya doo la daneynayo in la gaaro is afgarad, Dow ladda Federaalka Soomaaliya waxay og olaat ay soo jeedin ay soo jeediyeen hoggaam iya asha Dowladaha xubnaha ka ah Federaal ka 17kii Sebtember si loo qabto doorasho dad ban.
Danta Dowladda Federaalka ee Soomaali ya ayaa weli sii jirta si ay u qabato doora sho ku dhisan is-afgarad, loo dhan yahay, iyo hufn aa” ayaa lagu yiri Qoraalka Wasaaradda.
Sidoo kale dowladda ayaa nasiib darro ku tilmaamtay in dhameystirka heshiiska 17-kii Sebtember ee lagu gaaray Muqdisho ay caq abad ku yihiin dalal shisheeye oo fara-gelin ku haaya arrimaha doorashooyinka.
"Nasiib darro, in kasta oo heshiiskaas iyo Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ay diy aar u tahay in ay wax ka qabato tabashooyin ka, haddana saameynta xoogagga dibedda ayaa weli caqabad ku ah dhammaystirka he shiiska si loogu gogol xaaro doorashada” ay aa lasii raaciyay Qoraalka Wasaaradda Arri maha Dibadda Soomaaliya.
Shirkii uu ku baaqay Madaxweynaha mu ddo xileedkiisu dhammaaday Farmaajo ayey dowladda sheegtay inay kasoo jawaabeen do wlad Goboleedyada dalka marka laga reebo Jubbaland iyo Puntland, iyadoona dowladda sheegtay in muhiim ay tahay in la saxiixo he shiiskii ay Baydhabo ku gaareen guddiyada Farsamada ee la magacaabay.
Dowladda Somalia Oo Shaacisay Dadkii Ugu Badnaa Ee U Geeriyooday COVID-19
Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay dad hor leh oo laga helay Cudurka halista ah ee Coronavirus oo kusoo laba kacleeyay guud ahaan dalka Soomaaliya. Warbixin ay soo sa aray Wasaaradda Caafimaada Xukuumadda ayaa lagu sheegay in 24-kii saac ee lasoo dhaafay Cudurka laga baaray 1,338 qof, isla markaana laga helay 257 kamid ah dadkaas, kadib markii baaritaano kala duwan lagu same eyay.
Dadka laga helay Cudurka ayaa 255 ka mid ah waxaa ay ku su gan yihiin Gobolka Ba naadir, deegaanada do wlad Goboleedka Galmudug oo laga diiwaan-geliyay 1 Ruux, halka Hirshabeelle laga helay hal qofm waxaana dadkaas 183 kamid ah ay yihiin Rag, halka 74 qofna waa Durmar.
Sioo kale Wasaaradda Caafimaadka Xuku umadda ayaa tilmaamtay in saacadihii lasoo dhaafay Cudurka ay u dhinteen 15, waxaana tirada dhimasha guud ahaan dalka gaartay 194, mana la shaacin dad Shalay ka bogsa day.
Tirada guud ee dadka laga helay Cudurka Coronavirus ee Soomaaliya ayaa haatan ga artay 5,889 qof, halka 3,757 ay ka bogsa deen, Wasaaradda Caafimaadka ayaa sheeg tay in dadka looga baahan yahay inay taxadar muujiyaan, si looga fogaado faafida Cudurka.
Guddigii Jubbaland U Joogay Muqdisho Oo Dib Ugu Laabtay Kismaayo + Sababta
Guddigii Farsamada ee dowlad Gobol eedka Jubbaland uga qeyb galay shirkii looga hadlaayay Arrimaha Doorashooyinka ee dha waan ka dhacay Magaalada Baydhabo ee Xa runta Gobolka Baay ayaa dib ugu laabtay Magaalada Kismaayo.
Guddiga oo maalmihii lasoo dhaafay ku su gaanaa Muqdisho una joogay qaban qaabada shirka dowladda Federaalka, dowlad Gobolee dyada iyo Gobolka Banaadir ayaa la xaqiijiyay inay dib ugu laabteen Kismaayo oo markii horey ay ka yimideen.
Warar la helayo ayaa sheegaya in sababta Guddiga Farsamada ee Jubbaland uga tag een Caasimadda dalka ay tahay mid la xiriirta rabshadihii saacadihii lasoo dhaafay ka dha cay Magaalada, una dhexeeyay Ciidanka do wladda iyo kuwa daacad u ah Musharaxiinta.
Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa she egay inay ka fiirsanayaan ka qeyb galka shir ka uu ku baaqay Madaxweynaha muddo xile edkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdull aahi Farmaajo ee dhacaya Muqdisho.
Madaxweyneyaasha maamulada Jubbala nd, Puntland iyo Galmudug ayaan weli soo gaarin Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka, waxaana haatan Magaalada ku sugan Madaxweyneyaasha Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle oo Dorraad iyo dorraad yimid.
Taliska Ciidamada Daraawiishta Galmu dug Oo La Magacaabay (Wareegto)
Wareegto kasoo baxday xafiiska Mad axweynaha dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, kuna taariikh aysan 20-2-2021 ay aa lagu magacaab ay Tali ska guud ee Ciid amada Daraawii shta Maamulka Gal mudug.
Madaxweynuhu: Markuu arkay; awoodda uu siinayo dastuurka & ahhmiyada ay leeda hay in la magacaabo taliska guud ee ciidan ka Daraawiishta Galmudug.
Markuu La-Tashaday; Madaxweyne-ku-xige enka, tixgeliyeyna aqoonta iyo waaya-aragni mada ay u leeyihiin maamulka ciidanka, howlaha amniga iyo deegaanka
2-G/le, Cabdikariin Maxamuud Maxamed (Kheyre), Taliye kuxigeenka Ciidanka Dara awiishta Galmudug.
Ugu danbayntii, waxaa lafarayaa dhamm aan hay’adaha kala duwan ee Galmudug in ay la shaqeeyaan taliska cusub ee la magaca abay si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo.
Madaxweynaha Hirshabelle oo ku booq day gurigiisa M/ynihii hore Xasan Sh.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hir shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa Sha lay hoygiisa magaalada Muqdisho ku booq day Madaxweynihii hore ee Dalka Xassan Sheikh Maxamuud oo sidoo kale ka tirsan midowga musharaxiinta.
Wax faahfaahin ah lagama bixin kulanka labada mas’uul,balse warar ku dhow dhow ayaa sheegaya iney ka wada hadleen xaala dihii ugu dambeeyey ee Somaliya gaar ahaan arrimaha doorashada iyo xiisadaha ka taagan caasimada.
Madaxweynaha Hirshabelle ayaa Muqdisho u jooga ka qeyb galka shirka uu Madaxweyne Farmaajo iskugu yeeray Madaxda dowlad go boleedyada iyo gobolka Banaadir kaasoo loo ga hadlayo dhameystirka heshiiskii doorasha
da iyo xalinta caqabadaha jira.
Cumar C/Rashiid o ku baaqay in guddi loo saaro Shaqaaqooyinkii ka dhacay Muqdisho
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya kana mid ah Xildhibaannada Aqalka sare ee waqtigooda dhamaaaday ayaa ka hadl ay shaqaaqooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay M/Muqdisho, kuwaas oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaaw ac ah.
Cumar Cabdirashiid Cali sha rmaake oo qoral soo dhigay bar aha bulshada waxaa uu dalbaday in Guddi xaqiiqo raadin ah loo saaro barista shaqaa qooyinkii ka dhacay M/ Muqdisho, oo uu sheegay inay ahaayeen kuwo halis ah.
"Mustaqbalka dalka ayay u wanaagsan tahay in la dhiso guddi dhex-dhexaad ah oo xaqiiqada kala saara soona baara dhac do oyinkii 19-kii Bishan Febaraayodhacay ee sabaaby inay iska hor-maadyo ka dhac aan muqdisho ayuu yiri” Cumar Cabdir ashiid.
Ugu dambeyn Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya kana mid ah Xildhibaannada Aqalka sare Cumar Cabdirashiid waxaa uu sheegay inay muhiim tahay in laga baaqsa do gacan ka hadalka.
Habeen kahor Muqdisho waxaa ka dhac ay dagaal dhex-maray Ciidamo ka wada ti rsan dowladda, kuwaas oo kala ahaa ku wo ilaalo u ah Madaxweynayaashii hore ee dal ka ee Sheekh Shariif & Xasan sheikh & Cii damo kale, kuwaas oo Midowga mushar ixii nta ay sheegeen inay soo weerareen la ba da Madaxweyne
howlgalka Ciidamada ayaa intii uu socday waxaa la tilmaamay in lagu burburiyay Saldh igyo dagaalamayaasha Al-shabaab ay ku lah aayeen deegaanada Mushaani Daniga iyo Ma jabta oo u dhexeeya degaanka Ianaale iyo de gmada qoryooleey ee G/Sh/Hoose
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaa liya Jeneraal Odowaa Yuusuf Raage oo la ha dlay Idaacada Ciidamada Qalabka Sida ayaa sheegay in howlgalka lagu dilay laba Sarkaal oo kamid ah shabaabka iyo Ciidamo badan oo la socday, waa sida uu hadalka u dhigay.
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Jeneraal Odowaa yuusuf raage ayaa Magacayada Sar aakiilsha la dilay ku kala sheegay Macalin Bu qaari oo ahaa hoggaamiyaha jabhada Al-Sha baab ee Gobolka Shabellaha Hoose iyo Sheekh Xasan ganeey.
Ugu dambeyntii Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya S/guudto Odowaa yuusuf raage waxa uu sheegay in howlgalka lagu bur buriyay Saldhigyadii Al-shabaab ay ku lahayeen degaanada Mushaani Daniga Maj abta ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Ciidanka dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Al-shabaab ayaa horey waxaa ay dagaal kala duwan oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ay ku dhexmareen deegaano iyo degmooyin ka tirsan Gobolka Shabeellaha
Wasaaradda Caafimaadka dowlad Gobol eedka Hirshabeelle ayaa faah faahin ka bixi say xaaladihii ugu dambeeyay ee Cudurka ha lista ah ee COVID-19 ee deegaanada Maam ulkaas, kadib markii uu Cudurka kusoo laba kacleeyay gudaha Soomaaliya.
Wasiiru dowlaha Caafimaadka Hirshabeel le Muxudiin Mukhtaar Macalin ayaa waxaa uu sheegay in Cudurka COVID-19 uu maalmihii la soo dhaafay ku faafay Magaalooyinka Jow har iyo Baladweyne, isla markaana ay diiw aan-geliyeen kiisas dhowr ah.
Muxudiin Mukhtaar ayaa sheegay in Gobol ka Shabeellaha Dhexe bishaan laga diiwaan-geliyay 9 qof oo qaba Cudurka, kadib markii lagu ogaaday baaritaano kala duwan oo lagu sameeyay, ayna dadkaas ku jiraan qaar ka mid dhaqaatiir Caafimaad. Waxaa uu intaas ku sii daraya Wasiiru dowlaha in Baladweyne dad ku sugan oo gaaray 100 qof laga baaray Cudurka, isla markaana 28 kamid ah dadkaas laga helay oo ku jiraan laba ruux oo Ajaanib ah kana yimid dalka Koonfur Afrika.
Dadka laga helay Cudurka ayuu tilmaamay in la geeyay Xarun gaar ah oo loogu tala-galay lagu karantiilo, isagoona xusay in Wasaara dda Caafimaadka DFS maalmihii dambe ays an Hirshabeelle kusoo daran deegaanada la ga diiwaan-geliyay kiisaska Cudurka.
Cudurka halista ah ee COVID-19 ayaa ku soo laba kacleeyay gudaha dalka Soomaa liya, waxaana Wasaaradda Caafimaadka dow ladda si maalinle ah u shaacisaa dad badan oo laga helay Cudurka iyo kuwo u dhintay intaba.
Sheekh Shariif "Waxaan Aad Uga Xunah ay In Lasoo Adeegsado Ciidamadii Aan Dhisnay”
Midowga Musharaxiinta u taagan qabasha da xilka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa Shalay kulan looga hadlaayay rabshadihii ka dhacay Magaalada Muqdisho ku yeeshay Hotelka Jasiira ee fadhigo odu yahay.Guddoomiyaha Midowga Musharaxiinta Sheekh Shariif Sh Axmed ayaa waxaa uu mar ka hor ey sheegay in ay ka xun yi hiin tallaabooyinkii DFS ku weerartay Xubnaha Midowga, kuna joojisay banaanbax nabadeed oo ka dhici lahaa Caas imadda.
Waxaa uu sheekh Shariif tacsi u diray dadkii waxyeelada kasoo gaartay weerarkii dhacay oo uu tilmaamay in lagu qaaday Mu sharaxiin iyo dad shacab ah oo doonayay in ay soo bandhigaan aragitooda ku aadan in da lka laga qabto doorasho heshiis lagu yahay. Isaga oo sii hadlaayay Shariifka ayuu cadde eyay in falanqeyn dheer oo ay sameeyeen k adib Go’aan ku gaareen Musharaxiinta in lasii wado banaanbaxa dastuuriga, isla markaana uu yahay mid Caafimaad u ah dalka iyo dad ka Soomaaliyeed.
Sidoo kale waxaa uu sheegay Shariif inay aad uga xun yihiin in Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Farmaajo uu Ciidanka dowladda u adeegsado danno gaar ah iyo in lagu weeraro Mas’uuliyiin kala duw an oo dalka xilal waaweyn kasoo qabtay.
"Ciidanka Dorraad markaan dhiseenay waan u hagar baxnay, waxaana aad uga xun ahay in lasoo adeegsado ciidamadii aan dhis nay, waa muhiim ah in la ilaaliyo xorriyada ha dalka iyo dowladnimada ayuu yiri Sheekh Shariif oo warbaahinta la hadlay.
Ugu dambeyn Madaxweynihii hore ee dal ka Shariif ayaa u mahadceliyay shacabkii do onayay inay ka qeyb galaan banaanbixii ay ku dhawaaqeen oo soo bandhigi lahaa sida ay u rabaan in dalka laga qabto doorasho xor iyo xalaal ah, heshiisna lagu yahay
Muqdisho oo laga Daahfuray barnaamij ka wacyigelinta COVID-19
Wasaaradda Caafimaadka iyo Maamulka G/Benaadir ayaa Shalay M/Muqdisho ka daa hfuray barnaamij dadka looga wacyigelinayo xanuunsidaha COVID-19.
Wasiirka Caafimaadka Somaliya, Foosiya Abiikar Nuur iyo Gudoomi yaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa M/Mu qdisho, Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaana daahfuray barnaamijka ka wacyigelinta dadweynaha ee COVID-19.
Wasiirka Caafimaadka ayaa G/ G/Banaadir ka guddoontay agab caafimaad, oo loogu tal a galay ka hortagga fayriska Corona, waxaa na uu Duqa Muqdisho ballanqaaday inuu W/ Caafimaadka kala shaqayn doono dada alada lagu xakameynayo faafitaanka xanuunka, is la-markaana ay taageeradooda joogteen do onaan.
W/Caafimaadka iyo Duqa Muqdisho ayaa sidoo kale Shaqaalaha iyo Maamulka Isbitaal Martini kaga mahadceliyay, sida ay naftooda ugu harayaan badbaadada dadka uu soo rito xanuunka.
DFS ayaa Isbitaal Martini ugu talagashay in lagula tacaalo dadka uu soo rito xanuunka saf-marka ah ee COVID-19, oo dalka dib ugu soo laba kacleeyay.
Agabka caafimaad ee Shalay uu Maamul ka G/Banaadir geeyay Isbitaal Martini ayaa imaanaysa, xilli la soo sheegayo inuu aad u hooseeyo adeegga uu isbitaalkaasi bixiyo.
M/Muqdisho ayaa si weyn looga dareemay soo laba kacleynta xanuunka, iyadoo dadk una bilaabeen in ay ka taxadaraan.
Musharaxiinta "Mudaharaadyada Aan Da macsannahay Illaa Meel ay Maraan Doo rasho Ka Dhici Dalka”
Afhayeenka Midowga Musharaxiinta Daahir Maxamuud Geelle oo ka hadlaayay qorshaha dowladda is hor istaaga ugu sameeysay bana anbixii Musharaxiinta ayaa waxaa uu sheegay in uu ahaa mid la isku dayay in lagu dilo xubno ka tirsan Musharaxiinta.
Madaxweynaha muddo xilee dkiisu dhammaaday ee Farm aajo ayuu ku eedeeyay wee rar uu sheegay in lagu qaaday hotelka Maa’id oo ay deganaayeen Xasan Sheekh, Shariif Sh. Axmed iyo Shariif Xasan Sheekh, isla mar kaana la doonayay in la dilo, waa sida uu yiri.
Waxaa uu sheegay Musharax Daahir Geelle in rasaastii Dorraad lagu furay banaanbaxa yaal ay hoggaaminayeen Musharaxiinta la da macsanaa in lagu dhuftay dadkaas dhigayay banaanbaxa oo ay ugu horreeyeen C/raxma an C/Shakuur iyo RW hore Kheyre.
Isaga oo sii hadlaayay Daahir Geelle ayuu tilmaamay dal aan mudaharaad ka dhici karin aan doorasho lagu qaban karin, wuxuuna Ca rrabka ku dhuftay in illaa banaanbaxyada ay damacsan yihiin Musharaxiinta meel ka ma raan aysan dalka ka dhici doonin doorasho.
"Meel aan lagu mudaharaadi karin la is kuma dooran karo, Ilaa mudaharaadyada aan damacsanahay meel ka maraan, waa in la xa qiiqsado in wax doorasho aysan jirin oo ka dhi ci doona dalka, haddii aan mudaharaad nab ad ah ka dhicin” ayuu yiri Daahir Geelle.
Si kastaba Musharaxiinta Madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay inay sii wadi doonaan ba naanbaxyo ka dhici doona Magaalada Muq disho, xili Dorraad dowladda Federaalka ay is hor istaag ku sameeysay banaanbax ay soo abaabuleen Musharaxiinta oo ka dhici lahaa Daljirka daahsoon ee degmada Boondheere.
Maxkamad gobolka Banaadir oo Shirka da Favori LLC ku heshay ku tumasho xuquuq shaqaale xukunna ku riday
Maxkamada Gobolka Banaadir ayaa ku he shay shirkada Favori LLC ee maamusha Ga roonka Diyaaradaha Muqdisho, ku tumasho xuquuq shaqaale, kadib markii sharci yaqaan ada Xiriirka Ururada Shaqa alaha Soomaaliy eed ee (FESTU) ay kusoo eedeeyeen ku xad gudbida xuquuqda mid kamid ah shaqaalaha xoogsatada ah ee shirkadda u shaqeeya.
Shirkadda Favori ayaa horraantii bishii Sep tember ee sanadkii tagay 2020 shaqada ka er iday Abshir Xasan Cabdulle oo ka mid ahaa xoogsatada shirkadda u shaqeysa ee ka haw lgalayay garoonka diyaaradaha Aden Cadde, iyadoo shaqo ka eryidiisa aan loo marin wax sharci iyo nidaam ah.Xiriirka Ururada Shaq aalaha Soomaaliyeed ee (FESTU) oo baaris ku sameeyay sababta Abshir oo xoogsata ah shaqada looga eryay, ayaa waxaa u caddaa tay in shaqo ka eryidiisa aan loo marin sifo sharci ah.
FESTU garyaqaano u qabtay Abshir Xas an Cabdulle ayaa ku guuleysatay in gal dac wadeed laga furo Maxkamada Gobolka Bana adir halkaasi oo lagu qaaday kiiska dacwada, ayadoo Maxkamadu aqbashay inay qabato kii ska muwaadinka taariikhdu markii ay ahayd 14 November 2020 isagoo xilligaasi laba bil ood shaqadii laga eryay banaanka ka jooga.
Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa xilliyo kala duwan u fadhiisatay dhageysiga dacwa da iyo dooda labada dhinac ee ka kala socd ay Xiriirka Ururada Shaqaalaha Soomaaliy eed ee (FESTU) iyo Shirkadda Favori LLC, waxaana Maxkamaddu sameysay baaritaano iyo dhageysiyo farabadan taasi oo ugu damb eyntii Shalay ay ku dhawaaqday natiijada ka soo baxday kiiska dacwadda Abshir Xasan Cabdulle.
Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqday in shaqo ka saaridda Abshir Xa san Cabdulle ay tahay mid sharci darro ah wa xayna Maxkamaddu amartay in lagu celiyo shaqadiisii sidoo kale in la siiyo dhammaan mushaarkii ka baaqday laga soo billaabo bi shii October ee sanadkii tagay 2020.
Cumar Faaruuq Cusmaan, Xoghayaha Gu ud ee FESTU oo saxaafada la hadlayay kadib markii uu xukunka soo baxay ayaa yiri "wa xaan isku daynay inaan kala hadalno shirkad da Favori LLC inay joojiso ku xadgudbidda xu quuqda shaqaalaha, ayna dhowrto sharciga dalkan u degsan ee damaanad qaadaya xuqu uqda shaqaalaha. Nasiib darro wey ka dhaga adeegeen ayagoo u heysto inay sharciga ka sareeyaan oo xuquuqda shaqaalaha Soomaal iyeed ku tuman karaan isla markaana aan tila abo sharciga waafaqsan aan laga qaadey nin”.
"Waan sii kordhineynaa dadaalkeena aan ku dooneyno inaan ku difaacno kuna soo dhi cino xaqqa ay leeyihiin shaqaalaha Soomaal iyeed. Marna ma yeeli doonno in lagu tunto xuquuqda ay leeyihiin shaqaalaha Soomaali yeed” ayuu ku daray Cumar Faaruuq Cis maan.
Dil Xalay Ka Dhacay Magaalada Muqdisho Iyo Faah Faahin Kasoo Baxeysa
Waxaa fiidnimadii Xalay taalada Daljirka daahsoon ee degmada Boondheere ee Go bolka Banaadir lagu dilay Sarkaal ka tirsan Ci idanka Booliska dowladda Federaalka oo kam id ahaa Ciidamo ku sugnaa halkaas.
Askar ka tirsan Ciidanka dowladda ayaa la sheegay in Sarkaalka ay rasaas uga fakatay, taasi oo uga dhacday qeybaha sare ee jirkii sa, isla markaana uu goobta ku geeriyooday, sida ay sheegeen goobjoogayaal.Ciidamo isla goobta joogta ayaa qaaday Meydka Saraalka la dilay oo ka tirsanaa Ciidanka Booliska DF S, isla markaana la sheegay inuu kamid ahaa Ciidamo joogay Daljirka daahsoon ee degm ada Boondheere.
Warar la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in Sarkaalka la dilay lagu ma gacaabi jiray Maxam uud Maxa med oo loo ya qaanay Abkoow Cambu ure, waxaana baraha Bul shada harr eeysay tacsi loo dirayo Marxuumka.
M/Muqdisho ee Caasi madda dalka ayaa wax aa sidaan oo kale loo dilay Saraakiil iyo Askar ka tirsaneyd Ciidanka dowladda Federaalka Soomaaliya, iyagoona ay dileen Askar kale oo rasaas uga fakatay.
Qoorqoor Oo Kulamo La Qaatay Madaxw eyneyaashii Hore Ee Dalka Iyo Kheyre
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Galmu dug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo sha lay soo gaaray Muqdisho ayaa kulamo gaar gaar ah la qaatay Madaxwe yneyaashii hore ee Soma liya & Ra’iisul Wa saarihii hore ee dalka oo kamid ah Musha ra xiinta. Kulama da dhexmaray Qoorqoor, Gudd oomiyaha Mid owga Musharaxiinta Sheekh Shariif Sh Ax
med, Xasan Sheekh iyo Xasan Cali Kheyre ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasad eed ee dalka iyo khilaafka ku hor gudban qab soom ida doorashooyinka.
Madaxweyn aha Gal mudug ayaa sigaar ah Musharaxii nta uu la ku lmay uga hadlay rabshadihii ka dhacay M/Mu qdisho iyo is hor istaaga dow ladda ku same ysay banaanbax ay soo abaa buleen Mushara xiinta oo ka dhici lahaa Daljirka daahsoon.
Warar la helayo ayaa sheegaya in Qoorqoor uu Musharaxiinta ka dalbaday in xal laga ga aro xaaladda Cakiran ee dalka iyo sidii loo dhameyn lahaa khilaafka ka taagan doo rashada oo aan weli heshiis rasmi ah laga gaarin.
Kulamada ka dhacay Muqdisho ayaa ka dhacay, kadib markii uu Codsaday Madaxwe yne Axmed Qoorqoor oo gelinkii dambe ee shalay soo gaaray Caasimadda, si uu uga qe yb galo Shirka uu ku baaqay Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Farmaajo.
Xiisad siyaasadeed ayaa haatan u dhexe eysa dowladda Federaalka ee waqtigeeda idl aaday iyo Musharaxiinta Madaxweynaha So omaaliya, kadib is hor istaagii dowladda ku sameeysay banaanbixii Musharaxiinta, sidoo kalena lagu rasaaseeyay Musharaxiin ay ka mid yihiin Xasan Cali Kheyre, C/raxmaan C/ Shakuur, C/kariin Guuleed iyo xubno kale.
XOGTA KHASAARAHA NAFEED EE KA DHASHAY ISKU DHACYADII CIIDANKA DF IYO DIBAD-BAXAYAASHA
Jimcihii 19-kii February dagaal ka dhacay Daljirka Daahsoon oo maalinaas la filayay inuu bannaanbax ka dhaco ayaa sababay kha saare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Dagaalka ayaa si kedis ku bilowday,wuxuuna dhaxmaray ciidanka Do wladda iyo ilaalada mu sharaxiinta. Waxaa xigay maalintii jimaca ha 19-kii February in qol-qolotooyinka kale ay ka dha ceen waddooyin dhawr ah oo caasim ada ah oo ay xireen ciidanka si ay u xakame ey aan dad doonayay in ay ka bannaan-baxan in xukunka dalka lagu sii joogo si sharci daro ah.
In ka badan sagaal- qof ayaa ku geeriyoo tay halka lix iyo toban kalena ay ku dhawac meen kuwaas oo isugu jira ciidanka ku da gaalamay nawaaxiga Daljirka Dahsoon iyo ku wo kale oo ku waxyeeloobay rasaasta ciidan ka DDFS ay ku rideen bannaan baxyaa sha.
Maalintii ay dibadbaxyada dhaceen ee Ji ma caha 19-ka February, degmada Kaaraan is ka hor imaad ka dhacay ayaa la soo wariyay inay ku dhaawacmeen shan qof oo shacab aha ha lka qof kalena uu ku dhintay
Saqdii dhexe habeenimadii isla habeenimada as dagaal kale oo ka dhex bilowday ciidanka Do wladda ee Gorgor iyo ilaalada musharraxi inta oo ku sugnaa Daljirka – Daahsoon ayaa la xaqii jiyay in ay ka dhalatay khasaare isugu jira dhim ashada shan qof oo labada dhinac ah iyo dha awac Lix –kale halka rasaas wiifta ah uu ku dhin tay hal qof laba kalana ay ku dhaawacmeen , degmada Warta-nabadda.
Dhanka kale , Maymuum Bashiir waa 25- jir ku nool degmada Hodan gaar ahaan carw adii hore ee xoolaha halkaas oo rasaas ku halee shay xili saq dhexe ah, markaas oo hur dada ay kaga soo salashay xabad kaga dhac day qaybta dambe ee jirkeeda.
"Waxa ay ahayd habeen Jimca ah, marka ay rasaasta ku dhacday Maymuun runtii xaa lade edu markii hore waa ka naxnay waddooyi nka maadama ay xirnayeen isbitaalna waan gayn waynay taasna waxay sababtay in mar kii jidad la furay in isbitaal ula cararno,” sidaas waxa she egay ehellada Maymuun oo aan la hadalnay.
Degmada Warta-Nabada laba qof ayaa ku geeriyootay laba kalana waa ay ku dhawac meen ka dib markii ay haleeshay rasaas wiifta ah oo ay is waydaarsanayeen ciidanka Dowlad da iyo kuwo ilaalo midowga musharraxiin ta.Eh allada mid ka mid ah dadkii dhaawacm ay oo magaciisa lagu soo koobay Kaadiye ay aa she egay in dhawaca wiilkooda ka dib u naxdin uu u dhintay Axmed Saki Cumar oo 28 sano jir kaas oo ka mid ahaa dadkii gurmadka fidinayay.
Hay’adaha Dowladda Federaalka Soomaaliya wali lagama hayo wax war ah oo ku saabsan tirada khasaaraha ka dhashay dagaal ka ka dhacay magaalada Muqdisho.
sacudi carabiya oo ka hadashay rab shadihii muqdisho
Dowladda Sacuudiga ayaa kusoo biirtay dow ladaha ka hadlay rabshadihii M/Muqdisho ku dhexmaray dowladda iyo musharixiinta. Wasaar adda Arrimaha Dibadda ee Boq ortooyada Sac uudiga ayaa she egtay inay si dhow ula socd aan xaaladaha Soomaaliya gaar ah aan khilaaf ka ka taagan Doora shada Sooma aliya iyo rab shidihii ugu damb eeyey ee ka dhacay Muqdi sho. Qoraalka kasoo baxay Wasaaradda oo la gu daabacay Wakaaladda Wararka ee Sacuud iga ee SPA ayaa lagu sheegay in wad aha dal ka uu yahay xalka ugu fiican ee loo ga hor tagi karo inuu dhaco dagaal dhiig ku daato.
"Wasaaradda Arrimaha dibadda Sacuud iga waxa ay indhaha ku heysay horumarka Soomaa liya & Dhacdooyinka walaalaheen JFS, waa wax laga xumaado in dhimasho iyo dhaawac dad ku noqdaan isku dhac ka dhacay Muqdisho ,”ayaa lagu yiri warka kasoo ba xay Wasaarad da Arrimaha Dibadda ee Sac uudiga.
Sacuudiga ayaa dhinacyada khilaafka ka dhaxeyo ugu baaqday in si deg deg ah loo ga aro xal nabadeed oo lagu soo afjaro khilaafka taagan halkii la door bidi lahaa dagaal iyo ra bshado."Waxa aan adkeyneynaa daganaanta walaalaha Soomaaliya oo aan leenahay waa in aad xal nabadeed ka gaartaan kuna dhamm eys aan wax waliba oo la kala tabanayo si loo taag eero nabadgalyada, Xasiloonida iyo wad ajirka,” ayey tiri Wasaaradda.
Sacuudiga ayaa ugu dambeyntii dadkii ku dhaawacmay rabshahadaas u rajeysay caaf im aad deg deg ah waxayna sheegtay inay mu ru gada la qeybsaneyso qoysaska ay dadkooda dhibaatada soo gaartay. Sacuudiga ay aa ku biiraya Dalal, Ururo & dadka kala duw an sida Qaramada Midoobay, Midowga Yur ub, Midow ga Afrika, IGAD & kuwo kale oo ka falceliyay is ku dhacii habeen ka hor Muqdisho ku dhexm aray Ciidamada DF & ilaalada Mush arixiinta, di badbaxyaasha lagu rasaaseeyay Caasimadda & khilaafka ka taagan Doora shooyinka Dalka.
Xoghayaha guud ee QM ayaa taageero u muujiyey in shacabka Muqdisho ay dibad-bax dhigi karaan, kadib markii ciidamada dowlad da ay weerareen dibad-baxayaal dalbanayey in Far maajo ka dego kursiga, maadaama waq tigu ka dhammaaday.
António Guterres ayaa qoraal uu ka soo sa aray rabshadaha ku muujiyey inuu aad uga walaacsan yahay wixii dhacay, wuxuuna dhin acyada ugu baaqay inay muujiyaan is-xaka meyn.Xoghayaha guud ayaa sidoo kale ugu ba aqay hogaamiyayaasha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay si deg deg ah isugu yimaadaan, si ay usoo geba-gebeeyaan heshiis doorasho lagu qabto oo waafaqsan heshiiskii 17-ka September.
"Xoghayaha guud waxa uu sidoo kale ku baaqayaa inay si buuxda loo xushmeeyo xuq uu qda ay dadka u leeyihiin inay si nabad isugu yim aadaan iyo xo riyadda hadalka,” ayuu yiri Antó nio Guterres oo taageero u muujinaya dibad-baxyada. Waxa uu sidoo kale ku celiyey taage erada buuxda ee QM ay u hayso waddada ay sha cabka iyo dowlad Soomaaliya ku gaarayaan nabad, xasilooni iyo barwaaqo.
Hadalka António Guterres ayaa imanaya ay ada oo xaaladda Soomaaliya ay kasii dare yso, islmarkaana waqtigu ka dhamaaday Max amed Cabdullaahi Farmaajo balse uu diidan yahay inuu doorasho qabto ama kursiga ka dego.
Dawladda Imaaraatka Carabta ayaa ka ha dashay rabshadihii ka dhacay Magaalada Mu qdisho ee Caasimadda dalka, una dhexeeyay Ciidanka dowladda Federaalka iyo Ciidamo daa cad u ah Midowga Musharaxiin ta. Qoraal kasoo baxay Wasa aradda Arrima ha dibadda Imaa raadka ayaa waxaa lagu she egay inay ka wala acsan yihiin xaaladda kasii dareysa ee Soomaal iya gaar ahaan tan Muqd isho ee ka dha latay ra bshadihii dhacay iyo aw ooda loo sheeganayo shacabka. "Isutaga Im aaraatka Carabta ayaa walaac xoogan ka muu jisay xaalada kasii daray sa ee caasimada Soo maaliya ee Muq disho, taasoo ka dhal atay rabs hadaha soc da iyo aw ooda xad dhaafka ah ee loo ade egsanayo dadka shacabka ah” ayaa la gu yiri qoraalkan.
Ugu dambeyn Imaaraadka Carabta ayaa Dawladda Faderaalka Soomaaliya ugu ye ertay magaca ahaan dawlad KMG ah, wax ayna ka mid tahay dalalka la sheego inay far agalinta ku sameeya arrimaha gudaha ee Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashoo yinka.
Garsoore Cusub Loo Magacaabay Qarax yadii Burburiyey Dekadda Beyruut
Wasiirka Caddaaladda Lubnaan Mariya Kal uud ayaa u magacawday Garsoore Daariq Al-Beydaar inuu hogaamiyo baaritaanka qaraxii ka dhacay dekedda magaalada Beyruut, ka dib markii qaar ka mid ah falalka garsoorahii hore uu dhaliyay caro dadweyne.
Maxkamadda sare ee Lubnaan ayaa ka reeb tay garsoore Sawaan baaritaanka dacwadan, iyada oo ka jawaabaysa qoraal sharci ah oo ay soo gudbiyeen Wasiirkii hore ee Maaliyadda dalkasi Cali Xasan Khaliil iyo Wasiirkii ho re ee Hawlaha Guud KhaaziZaciiter, iyaga oo ku eedeeyay Garso ore Sa waan wax is daba marsiin iyo hawl gudasha la’ aan. Jimcihii Dorraad , tiro ka mid ah qoysas kii ay dhibaatada ka soo gaartay qaraxii Dekada Beyruut ayaa waxay ku hor mudaaharaadeen qasriga caddaaladda ee Beyruut si ay u cambaareeyaan go’aanka garsoore Sawaan lo ga reebay dacwada, dadkan oo sitay boorar ay ku dalbanayaan in la dadjiyo baaritaa